အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဘ၀လမ်းပေါ်က အမှိုက်ကားများ
41 Responses to “ဘ၀လမ်းပေါ်က အမှိုက်ကားများ”
ချောေ၇ အ၇မ်းနှစ်သက်မိတဲ့ စာစုလေးပါ။ စာလေးကိုဖတ်ပြီး ဆင်ခြင်ဖို့ သတိ၇သွားပါတယ်။
very good post. Thanks for this post.
အမှိုက်ဥပမာလေး သိပ်ကောင်းတယ် ချောရေ ... ကိုယ့်ဆီမှာလဲ အမှိုက်တွေဘယ်လောက်တောင် တင်မိနေပြီလဲ မသိပါဘူး ...
များ တို့ ဒီမှာက အမှိုက်ကို အိမ်ထဲရှိ အမှုိက်ပုံးထဲ ထည့်ရုံပဲ နောက်က အိမ်ရှင်က သူ့သူ လုပ်သွားရော အဟော အဟော မိုက်ရယ်နော် ခစ်ခစ်
လာယူမှတ်သား သွားပါတယ် ဒေါ်ချောရေ
အမှောင်ထုကြီးထဲကို မီးမောင်းလေး တစ်ချက် ထိုးပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။
ဒီလိုကောင်မွန်တဲ့ စာလေးကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မချော ရေ.. အမှိုက်ကား ဥပဒေသလေးက လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ ဥပဒေသလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ မန်းမှာဆို ပိုပြီး တော့အဲဒီ ဥပဒေသ အတိုင်းပဲ လိုက်နေ နေရပါတယ်ဗျာ. အထူးသဖြင့် ညပိုင်းဆို ဆိုင်ကယ် သုံးယောက်စီးတဲ့ အမှိုက်ကားတွေကခဏခဏ ကိုယ့်အပေါ်ကို သွန်ချတက်ကြပါတယ်.. အဲဒီအမှိုက်တွေကို လက်မခံပဲ ပြန်ပြီး ခွာချ ထားခဲ့ရတာတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူးဗျာ.. အမှိုက်ကား ဥပဒေသ လေးရဲ့ အနှစ်သာရလေးကို ပိုပြီး သိခွင့်ရလိုက်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. စာအကြွေးတွေလည်း များနေပြီဗျ.. နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လာ ဖတ်ပါအုံးမယ်..
တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ တက်စီ မောင်းသမားပါပဲ၊ သူ့ခံယူချက်နဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ တဘက်လူမှားကြောင်းပြဘို့လို့တယ်၊ မဟုတ်လို့ဆိုရင် မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ဆက်လုပ်နေဦးမယ်၊
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဥပမာလေး ချောရယ်၊ စလုံးမှာလည်း ဒီလိုပဲ၊ လူတော်တော်များများက ရေဆူမှတ်ရောက်နေကြတာ၊ စိတ်ဖိအား များနေတော့ ဘာလေး ဖြစ်ဖြစ် မပြုံးနိူင်၊ ခွင့်မလွှတ်နိူင်၊ မပြီးစီးနိူင်ကြဘူးလေ....
ဖတ်ဖူးတယ်.. အဲဒါလေးအရမ်းကြိုက်တယ်.. ကိုယ်တို့လည်း တကယ် ကျင့်သုံးသင့်တယ်နော်..
အခုမှ အလုပ်လေး နည်းနည်း အားတုန်း အပြေးလေး အကြွေးလာဆပ်သွားတယ်။
ဖတ်သွားတယ် ညီမ ရေ အမှိုက်ကားလေး မောင်းပြီး သူများ အပေါ် မသွန်မိဘို့ သတိထားရမယ်
မချောရေ..ဥပဒေသ ကတော့ ကောင်းပါရဲ့။ သတိလက်လွတ် ဖြစ်တဲ့အခါတော့ သူများအမိူက်တွေ လက်လွဲယူခဲ့တာများလှပေါ့။ ကျင့်သုံးဖို့တော့ လက်တွေ့မှာ ခက်တယ်ဗျာ။ စာကောင်းလေးတွေ တင်ပေးတဲ့ မချောကိုတော့ ကျေးဇူးပါ။
အမချောရေ......လိုက်နာသင့်တဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်ဗျာ....မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
တိုတိုလေးဆိုတဲ့လူ့ ဘဝ ကို အပေါ်စီးက ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်မျိုး
သူ့ မှာရနေလို့ ပါပဲ လို့ ၊
ကျွန်တော်တို့က မရ သေးပါဘူးနော.......
အမှိုက်ထဲက ရွှေကျင်ရမှာပေါ့း)
ကျနော်လည်း တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါ
တစ်ယောက်ယောက်အပေါ် သွန်ချ မိပါ့
ဒါပေမယ့် အတတ်နိင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းနိင်အောင်
ဟုတ်တယ် အမှိုက်တွေ များတဲ့အခါ သူများပေါ်မသွန်မိအောင်ရော၊ သူများအမှိုက်ကို ပြန်မယူဖြစ်အောင် သတိထားရမယ်။
ဒီပိုစ်လေးလည်း အရမ်းကောင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
အံ့ဖွယ်Taxi သမားပါလား..နယူးယောက် က တက်ကစီသမားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး..၊
စာရေးအားကောင်းသလို စာတွေအကုန်လုံးလဲ စာကောင်းတွေချည်းပဲ ချောရ..
အမှိုက်တွေပြည့်လာလို့ သွန်ချဖို့လိုရင် အမှိုက်ပုံးမှာပဲ သွန်ချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
ကိုယ့်ဆီလည်း လာအသွန်မခံနိုင်ပါဘူး၊ ပါးနပ်မှ၊
တစ်ယောက်က ပူလှောင်နေရင် တစ်ယောက်က အေးးးဆေး နေပေးလိုက်တော့
အမှိုက်ထုတ်တွေကြောင့် စိတ်တွေလည်း ဖိစီးရတယ်..။
အမှိုက်ထုတ်တွေ သူတပါးကို မပေးမိအောင် ဆင်ခြင်ရမယ်...။
အမှိုက်ထုတ်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာလည်း နေထိုင်တတ်ရမယ်။
အမှိုက်ထုတ်တွေနဲ့ လူသားတိုင်း ကင်းဝေးပါစေ..။
လောလောဆည်..အမှိုက်ကားလာတုန်း သွားသွန်လိုက်ဦးမယ် ချောရေ..။ :)
သူပြောတာ သိပ်မှန်ပါလား.. ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါသ၊မောဟ အမှိုက်တွေအပြည့် တင်ဆောင်ပြီး ဘ၀လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်နေသလို တစ်ခါတစ်ရံ သူများဆီက အမှိုက်တွေပါ ကိုယ်က လက်ခံလိုက်မိသေးတယ်။
ဒီစာမဖတ်ခင်ကတော့ အမှိုက်တွေ ခေါင်းထဲ ပြည့်လို့ပေါ့..သူများအမှိုက်တွေရော..ကိုယ်တိုင်သွန်ထားတာတွေရော.။ ခုတော့ အမှိုက်ပုံးပြေးရှာနေပါပြီ.။
ကိုယ်တိုင်ကျင့်ဖို့ကတော့ တော်တော်ခက်မယ့်အလုပ်ဆိုတာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိနေတယ် .. ဟင်းးးး
ပထမဆုံးတော့ သတိတရားကိုသာ တချိန်လုံး ကိုင်စွဲထားနိင်မှ ဖြစ်မယ်
နေတတ်သွားရင်တော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့် ဖြစ်လာနိင်တယ်။
ဒီစာထဲကလို တခြားသူက အမှိုက်ထုပ်တွေ လာပစ်ရင်လည်း ကားဆရာလို အပြုံးနဲ့ တုန့်ပြန်နိင်ဖို့ ကြိုးစားရအုံးမယ်။
အမှိုက်ကား ဥပဒေသ တဲ့လား မချောရေ.... ဗဟုသုတ တစ်ခု ထပ်တိုးရ ပြန်ပြီပေါ့။ ကျေးဇူးပဲ အစ်မရေ......
အနော်ဆို လူလစ်မှ အမှိုက်ပစ်တတ်တယ်လေ.....။
အမှိုက်ကားဥပဒေက လေးနက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပဲ။
ဒီဥပဒေ လိုက်နာဘို့က လွယ်မလို့နဲ့ခက်တယ်နော်။
အမှိုက်တွေနော်...အမှိုက်တွေ.. တခါတခါ ညီမလေးတို့ဆီမှာ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်တယ် .. မလိုအပ်ဘဲ သိမ်းထားမိတော့ ရှုပ်တာပေါ့ချောရယ် .. မလိုအပ်တာတွေ မသိမ်းထားမိအောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ..
101% Right .....
မချောရေ.. ကျမလည်း အမှိုက်ကား ဥပဒေသလေးကိုလိုက်နာနေတုန်းပါ။ လိုက်နာပြီးသလောက်ကတော့ စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ရနေတာပါ။ လူတိုင်းလိုက်နာနိုင်၇င်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးနေမိပါတယ်။
Mary Yin Hnit Phway said...
san nu said...
ဟဲခုမှလာဖတ်ရင်း အကြွေးတွေကိုဆပ်သွားတယ် သိပ်ကောင်းတဲံ့ဥပဒေသလေးပါပဲ လိုက်နာနိုင်ဖို့
Today i readalot on your blog. I got knowledge and experience from your blog. And i can also travel around Myanmar and world.I already spend myalot of time I want to say more than thank you very much.
taxi သမားလေးရဲ့ စကားတွေက အမှန်ပေါ့.. လူတိုင်းကို ရန်ကိုရန်ခြင်း.. ဒေါသကို ဒေါသခြင်း တုံ့ပြန်နေရစတမ်းဆိုရင်တော့ ဘယ်မှာ လောကကြီး သာယာပါတော့မလဲ.. ပိုစ့်လေးက သိပ်ကောင်းတယ်.. မမချောရေ..။
အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ စာပိုဒ်လေးပါ။thank you very much...